Izindaba - Ungawukhetha kanjani umshini owodwa wokuthambisa?
Ungawukhetha kanjani umshini owodwa wokuthambisa?
Imikhiqizo yePulasitiki idlala indima ebalulekile emikhakheni eyahlukahlukene yokukhiqiza kwezimboni nezolimo kanye nempilo enezinto zazo ezinhle kakhulu ezifana nesisindo esincane, amandla aphezulu, ukumelana nokugqwala, nokucubungula okulula. Kodwa-ke, ngokusetshenziswa kabanzi kwemikhiqizo yepulasitiki, ukulahlwa kwepulasitiki kadoti sekuyinkinga enzima, phakathi kwalapho "okunzima ukwehlisa isithunzi ngokwemvelo" kube yinkinga engapheli edinga ukuxazululwa ngokuphuthumayo ekungcolisweni kwemvelo komhlaba.
Eminyakeni yakamuva, ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wepulasitiki wezwe lami, imboni yeplastic granulator nayo ithuthuke ngokushesha. I-granulator ingenza imikhiqizo yepulasitiki eyenziwe kabusha ibe ngamaphilisi epulasitiki ngokusebenzisa izinqubo ezahlukahlukene zokufeza umphumela wokusebenzisa kabusha ipulasitiki. Imboni ye-granulator ifaka izindawo eziningi emnothweni wezwe. Akusona nje isixhumanisi esibalulekile sokukhiqiza senani elikhulu lemikhiqizo yezimboni nezolimo, kodwa futhi kudlala indima ebalulekile ekuxazululeni ukungcola kwepulasitiki kwezwe lami, kukhuphula izinga lokuphinda kusetshenziswe kabusha kwemikhiqizo yepulasitiki, nokusungula uhlelo oluphelele lokusebenzisa kabusha ipulasitiki. .
Ezinkampanini zepulasitiki ezenziwe kabusha, ukukhetha i-pelletizer efanele ukusetshenziswa kwabo kubaluleke kakhulu, ngoba i-pelletizer yepulasitiki ayikwazi ukukhiqiza wonke amaplastiki ngenxa yezingcindezi ezahlukahlukene zepulasitiki nezokuxhuma. Ama-granulators ajwayelekile angavula kabusha futhi asebenzise amapulasitiki we-granulate empilweni yansuku zonke, kepha njengamanye amapulasitiki akhethekile, njengoplastiki bezobunjiniyela, i-polyethylene exhumene, indwangu ephothiwe, njll. Ngakho-ke, abakhiqizi kufanele banake izinhlobo zamaplastikhi okumele bawasebenzise kabusha lapho bethenga i-pelletizer, bese bekhetha i-pelletizer efanelekile.
Ngaphezu kwalokho, lapho uthenga i-granulator, udinga ukunaka amaphuzu alandelayo:
Cacisa injongo nenhloso yokuthenga i-granulator. Njengamanje, kunezinhlobo ezintathu zamakhasimende athenga ama-granulators emakethe. Zitshaliwe futhi ziqalwa yizinkampani ezingazodwana noma ezizimele. Abakhiqizi bepulasitiki bathenga ama-granulators ukuxazulula inkinga yokusala emafemini abo. Bese kuba khona abasabalalisi namabhizinisi okuhweba. Kumakhasimende aqala amabhizinisi awo noma amabhizinisi azimele, kufanele acacise izinhlobo zepulasitiki ezikhiqizwa yibhizinisi lapho uthenga i-pelletizer. Ama-pelletizer ajwayelekile angavuselelwa kuphela futhi akhiqize amapulasitiki enhloso ejwayelekile asuselwa ku-PP ne-PE, nakho okuyizinto ezijwayelekile ezenziwe ngepulasitiki ezimakethe zepulasitiki. Imakethe yezinto ezibonakalayo ze-PS incane uma kuqhathaniswa. Uma kunesiteshi sokuthengisa esicacile sama-plastiki akhethekile, abasebenzisi bangathenga futhi ama-pelletizers ahambisanayo.
Ukusebenza kwe-granulator. Ama-Granulators angahlukaniswa abe ama-granulators angama-single-screw kanye nama-granulators ama-twin ngokuya ngenani lezikulufo. Lapho i-single-screw granulator isebenza, ipulasitiki idluliselwa phambili ngokuvuthwa emgqonyeni. Lapho i-twin-screw granulator isebenza, ipulasitiki idluliselwa phambili ngomugqa oqondile emgqonyeni. Ngokwesimiso esisebenzayo, lapho umshini wamawele-isikulufu umiswa, okokusebenza emshinini kungathululwa ngokuyisisekelo, futhi umshini owodwa wesikulufa ungagcina inani elincane lezinsalela. Iningi lamapulasitiki lingasetshenziswa, futhi isikulufa esisodwa namawele singasetshenziswa ngaphandle kokwehlukanisa.
Kodwa-ke, lapho kwenziwa amapulasitiki asetshenziswe kabusha, ngenxa yendawo enkulu yesikrini esishintsha isikhunta nokuvalwa okulula, umshini wesikulufa esisodwa usebenza ngempumelelo; lapho kwenziwa amapulasitiki aguquliwe, ama-masterbatches ombala, nokupompa kombala okuxubile, imiphumela yale mishini emibili iyalingana. ; Lapho wenza imicu yengilazi eyandisiwe kanye nezinto zekhebula langaphansi kolwandle ezixhunywe ngaphesheya, kungasetshenziswa kuphela ama-granulators amawele. Ngaphezu kwalokho, ngokwezindleko zokuthengwa kwemishini nezindleko zakamuva zokukhiqiza, amathuba e-single-screw granulation aphansi kakhulu, kanti ama-granulators ama-twin-screw asenkingeni enkulu. Ngakho-ke, lapho uthenga imishini, kuyadingeka ukuthi ukhethe okokusebenza okuhambisanayo ngokwemikhiqizo ehlukene eyenziwe yinkampani.